‘Miteraka Olana Iray lehibe Ho Anao Ny Famoronan-kira Miresaka Fanavakavaham-bolonkoditra’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Oktobra 2017 2:43 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Español, Ελληνικά, Português, 繁體中文, русский, English
Sarin'i Aliou Toure ao amin'ny tarika Songhoy Blues. Naka ny sary: Leo Hornak
Tao amin'ny vohikala PRI.org no nivoaka voalohany indrindra ity tantara nosoratan'i April Peavey ity, tamin'ny faha 21 Septambra 2017. Naverina navoaka teto indray izy io ho mariky ny fiarahamiasan'ny PRI sy ny Global Voices.
Vao tsy ela akory izay no niteny tamiko i Aliou Touré hoe, “Miteraka olana iray lehibe ho anao ny famoronan-kira miresaka fanavakavaham-bolonkoditra.” Mpihira no sady lehiben'ny tarika Songhoy Blues, avy any Mali i Touré.
Io no nolazainy tao anatin'ny tononkirany amin'ilay hira vaovaon'ny tarika nampitondrainy ny lohateny hoe “Loko Iray Ihany,” ao anatin'ny rakikirany vaovao, “Fanoherana.”
Niaraka tamin'ny ankizy mpikambana amin'ny antokom-pihira iray ao Londona no nandraisana ny feon'io hira io. Hoy i Touré hoe mampisy fanantenana azy ny amin'ny hoavy ny fandraisana rakipeo miaraka amin'ny ankizy, indrindra fa rehefa mahafoy fotoana hiarahana sy hahafantarana bebe kokoa azy ireny ny olon-dehibe.
“Tsy mba tia manavakava-bolonkoditra ny ankizy. Rehefa mandeha any amin'ny sekoly anankiray izahay mba handrakitra ireny feon'ankizy ireny dia tena mahafinaritra tokoa ny mijery azy ireo — avy any amin'ny firenena maro samihafa izy ireo. Avy any Azia, India, Etazonia, Frantsa, ary Afrika. Miara-milalao eo daholo izy ireo, ary tena sambatra ery,” hoy izy. “Mahafinaritra ery ny mijery ankizy toy izaony. Hoy izahay hoe angamba ireo ankizy afaka hampianatra ny ray aman-dreny.”
Ilay hoe “Loko Iray Ihany” dia iray amin'ireo lesona maro be azo tsoahan'ny mpihaino ao anatin'ilay rakikira “Fanoherana.”
Milaza i Touré fa ny lesona hafa anankiray azo sintonina dia ny manova ny fomba fijery efa voavolavola ao anatintsika momba an'i Afrika, Mali ary Bamako, ny tanàna fonenany ary ny zava-drehetra mikasika ny— hevitra efa raikitra tampisaka ao an-tsaintsika dieny tany am-boalohany toy ny fiheverantsika fa ny fandikàn-dalàna sy ny heloka bevava no manjaka ao Bamako isaky ny kihon-dalana. Fomba iray hanotehana io hevitra raiki-tampisaka io, hoy i Touré, ny mamaly bontana amin'ny alalan’ ny mozika.
“Rehefa mampiditra olona miisa 100 ao amin'ny toerana kely iray ianao, ka alefanao ny mozika, dia ho hitanao fa ho faly avokoa izy ireo,” hoy izy. “Ary rehefa ajanonao amin'izay ny mozika, dia handeha izy ireo. Tsy mahaliana mihitsy izany raha vao tsy misy mozika. Noho izany, ny zavatra azontsika atao izao dia miezaka mandray izay zava-miseho rehetra manerana izao tontolo izao ka mijery fomba tsara hanangonana olona maro amin'ny toerana iray.”
Mety ho vitanao ny maka tàhaka ny tarika Songhoy Blues eo amin'ny fahazoana hery hampavitribitrika sy fisintonana lesona avy amin'ny zavatra rehetra nampianarin'izy ireo. Nitety tanàna manerana an'i Amerika Avaratra sy Eoropa ny tarika, nanomboka tamin'ny volana Oktobra .